घट्दैछन् आलियाका फलोअर्स
बलिउडड अभिनेत्री आलिया भट्टको इन्स्टाग्राममा झण्डै १० लाख फलोअर्स घटेका छन् । ४ करोड ९० लाख हाराहरी फलोअर्स भएको आलियाको इन्स्टामा अहिले ४ करोड ८० लाख फलोअर्स बाँकी रहेका छन् । सुशान्त सिंह राजपूतको आत्माहत्याको घटनापछि आलिया विवादमा मुछिएकी थिइन् । बलिउडमा बढ्दै गएको ‘नेपोटिजम’ र ‘ग्रुपिजम’को कारण सुशान्त मरेको
चलचित्र ‘आँधी तुफान- २’ बन्ने
चलचित्र ‘आँधी तुफान- २’ बन्ने भएको छ । लेखक तथा निर्माता मौनता श्रेष्ठले यस चलचित्र निर्माण गर्न लागेका हुन् । लकडाउनको समय उनले चलचित्रको कथा तयार गरिसकेका छन् । वि.सं २०६१ सालमा निर्माण भएको सफल चलचित्र ‘आँधी तुफान’को नामबाट मौनताले नयाँ चलचित्र बनाउन लागेका हुन् । ‘आँधी तुफान’लाई महेन्द्र बुढाथोकी
ऋचाले किनिन् ‘छ माया छपक्कै’ र ‘छक्का पञ्जा ३’
केही दिन अगाडि अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले आफ्नो दुई चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ र ‘छ माया छपक्कै’लाई एक एप्सबाट रिलिज गर्ने बताएका थिए । तर, उनले उक्त एप्सको विषयमा बोलेका थिएनन् । अहिले उक्त एप्सको विषयमा समचार बाहिरिएको छ । नायिका ऋचा शर्माले अमेरिकन टिमसँग मिलेर संचालन गर्न लागेको
सुशान्तको आत्माहत्यापछि सुरु भएको बहश
गत आइतबार बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आत्माहत्या गरे । आफ्नै नीजि निवासमा उनले आफ्नो घाँटीमा पासो लगाएर देहत्यग गरे । उनको आत्माहत्याको कारण डिप्रेशन थियो । डिप्रेशनको कारण भने बलिउडकर्मीहरु नै भएको धेरैको आरोप छ । बलिउडमा भएको ‘नेपोटिजम’ अर्थात् आफन्तलाई मात्र मैका दिने कुराले सुशान्त डिप्रेशनमा पुगेको धेरैले
आन्दोलनको तयारीमा चलचित्र संघ
चलचित्र हलहरुको साझा संस्था चलचित्र संघले सरकारले मागको सम्बोधन नगरेको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।चलचित्र संघका पदाधिकारीहरुको जुम बैठकपछि चलचित्र विकास बोर्डलाई माग पत्र वुझाइएको हो । चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत संघले सरकारलाई वुझाएको मागको सम्बोधन नभएको खण्डमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि संघले दिएको छ । चलचित्र संघले
शाकाहारी कलाकार: दीपकराजदेखि अनमोलसम्म
मासु तपाई हामी सबैलाई मन पर्ने परिकार हुन सक्छ । तर, कसैले मासु खान हिचकिचाउनु हुन्छ । मासु खानु हुदैँन् भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । त्यस्तै केही सेलिब्रेटीहरुले पनि मासुलाई निषेध गरेका छन् । अहिलेका चर्चित नायक अनमोल केसी मासु खादैँनन् । उनी कृष्णभक्त हुन् । उनी सानै उमेरदेखी मासु खादैँनन्
रोपाई गर्दै ‘नेपथ्य’का गायक अमृत गुरुङ
नेपालको सर्वाधिक सफल व्याण्ड हो, ‘नेपथ्य’ । त्यसका मुख्य व्यक्ति हुन्, गायक अमृत गुरुङ । हेर्दा सामान्य देखिने अमृतमा यस्तो खुबी छ कि, उनले जो कोही व्यक्तिलाई पनि आफ्नो गीतले मन्त्रमुग्द बनाइदिन्छन् । केही छिनमा नै उनले भिड जम्मा गर्न सक्छन् । विश्वका प्राय: देशहरुमा उनले कन्सर्ट गरिसकेका छन् ।
श्रीमानको साथ पाएपछि गरिमालाई बोल्ड बन्न कसले रोक्ने !
सेलिब्रेटी होस् वा सामान्य युवती । ‘बोल्ड एण्ड ब्युटिफुल’ बन्न कसलाई मन नलाग्ला र ? कुनै समय नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नायिका गरिमा पन्ताको निकै चर्चा थियो । उनलाई सफल नायिकाको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । उनी अभिनित धेरै चलचित्रहरु सफल पनि छन् । ‘निखिल दाई’बाट डेब्यु गरेकी गरिमाले २ दर्जन बढि
विकास बोर्ड पुगे दयाराम, भन्छन्- ‘सबैको साथ चाहिन्छ’
चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष दयाराम दाहालले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । सरकारबाट नियुक्ति पत्र पाएसँगै दयारामले चलचित्र विकास बोर्डको कार्यालय पुगेर आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका हुन् । विकास बोर्ड पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै दयारामले यस पदमा रहेर काम गर्नको लागि सबैको साथ चाहिएको बोलेका छन् । उनले भने,